Ogaden24 | Archive | Arimaha Bulshada
Wararkii ugu dambeeyay Gantaalkii Shiinaha ka baxsaday .
Dowlada Shiinaha auaa waxa at shaaca ka qaaday Arbacadii ina dhaaftay oo Gantaal ka baxay gacanta kantoroolka,kaasi oo khatar ku ah dunida. Sida ay sheegeen
Deg deg:Guriga Gudoomiyaha Xisbiga OLF oo caawa la weeraray.
Wararka caawa na soo gaadhay ayaa sheegaya in ciiddamada Dawlada dhexe ee Ethiopia ay hareereyen Guriga guddoomiyaha jabhda OLF ee Oromada. Xoggaha hordhaca ee ay
RW Abiy Ahmed Oromona mahayo Axmaarona ka Guurtay”WQ Faisal Rooble.
Sadex sano ka hor ayey ahayd markii RW Abiy laga wada daba dhacay. Qaar Axmarada maylka adag ka mid ah ayaa sujuudii ay Xayle Selaase siin jireen mid la mid ...
Malayshiyaad Sudan ka yimid oo Gonder weeraray.
Maleeshiyo dhanka Sudan ka timid ayaa maanta weerar saacado qaatay kusoo qaaday galbeedka Gonder, gaar ahaan agagaarka Mandoka. Maleeshiyadan oo addeeg sanaysay hub culus ayaa 80-Km guddaha Itoobiya soo galay, waxayna ...
ONLF: “XISBIGA PP MIISKA TALADA MA FADHIYAAN, EE WIILAL AXMARO AH BAA U FADHIYA”
ONLF: "XISBIGA PP MIISKA TALADA MA FADHIYAAN, EE WIILAL AXMARO AH BAA U FADHIYA" Dood ay qabatay warbaahinta OBN ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno matalayay xisbiyada Deeganka ku loolamaya. Nuut Faatuule ...
Ethiopia waxay toos u beegsanaysaa shacanka Tigrey ga.
Ra'iisal wasaaraha horeee Ethiopiaayaa waxa uu sheegay in Dowlada dhexe ee Ethiopia ay toos u beegsanayso shacabka Tigreega. Tamrat Layne ayaa sheegay in dagaalka waqooyi lagu beegsanayay shacabka Tigreega, balse uusan ...
100 Askari oo ka mid ah Nabad ilaalinta Ethiopia oo sudan u goostay.
Warka ka imaanaya Magaalada Khartoum ee caasimada Sudan ayaa sheegaya in Askar la mid ah nabad ilaalinta Ethiopia ay isu soo dhiibeen ciidankooda. Ilaa 100 askari oo nabad ilaaliyeyaal Itoobiyaan ah ...
Nuxurka Khudbadii Madaxwayne Farmaajo caawa jeediyay.
Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo caawa jeediyay khudbad la wada sugayay ayaa waxa uu kaga hadlay arimo muhiim ah. Waxaan halkaan ku soo gudbinaynaa Nadal jeedintii Madaxwaynaha oo qoraal ah ...
TPLF oo sheegtay in ay ka dagaalamayaan deegaanka Axmaarada.
Jabhada TPLF oo ay Dowlada dhexe ee Ethiopia dagaal kula jirto ayaa waxa ay sheegeen in ay ka dagaalamayaan. Af-hayeenka ciiddamada TPLF ee duurka kujira Gebre Sadik ayaa sheegay innay bur'buriyeen ...
Wafdi ka mid ah ONLF oo Gobolka Erar shir kuqabtay.
Wafdi ka mid ah Xisbiga ONLF oo socdaal ku marayay Gobolada deegaanka ayaa waxa ay maanta kulan ku qabteen qaybo ka mid aj Gobolka Erar. Waxaa Tuulada Xero-maygaag oo Dagmada Fiiq ...